Google Pixelbook 2 famoahana daty sy mari-tsoratra: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
Ny Pixelbook 2 an'ny Google dia andrasana hanomboka amin'ny 9 Oktobra - eto ny zavatra rehetra fantatsika hatramin'izao
Ny famoahana ny Chromebook manaraka an'i Google dia efa antomotra. Lisitry ny Pixelbook tamin'ny herintaona Mety ho ny torolàlana ho an'ny solosaina finday ampiasaina amin'ny Chrome OS, fa ny mpandimby azy, ny Pixelbook 2, dia andrasana hizarazara ny ante.
Google dia tokony hamerina ny ridao eo amin'ny fitaovana Chromebook farany indrindra amin'ny fotoana mitovy amin'ny Pixel 3 fanolanana amin'ity herinandro ity, izay hipoitra ny tsipiriany rehetra amin'ny farany.
Talohan'ny vanim-potoana, na izany aza, nanangona ny tsiranoka rehetra, ny tsaho ary ny fidirana anaty aterineto mikasika ny Pixelbook 2 ao anaty toerana iray. Vakio, ary afaka mampiseho amin'ireo namanao tech namana ianao ny fahalalanao fanta-daza Pixelbook 2 tsara alohan'ny fampisehoana any amin'ny fivarotana. Tsara foana ny mialoha ny sisin-dalana, sa tsy izany?
Google Pixelbook 2: Izay rehetra tokony ho fantatrao
Daty famoahana Google Pixelbook 2 UK: Rahoviana no hanomboka izany?
Ny Google Pixelbook 2 dia navela hanomboka amin'ny sehatra ofisialy mandritra ny hetsika "Made by Google" an'ny orinasa Silicon Valley ao amin'ny orinasa Silicon Valley amin'ny 9 Oktobra. Manomboka amin'ny 4PM BST, Google dia hamoaka ny antsipirihany rehetra momba ny vokatra ho avy, anisan'izany ny takelaka pixel 3, ny takelaka Pixel Slate, Home Hub mpandahateny mahay ary vaovao iray Chromecast media streamer.
Google Pixelbook 2 UK ny vidiny: Manao ahoana ny vidiny?
Tamin'ny taon-dasa, ny Pixelbook dia natomboka ho £ 999, miaraka amin'ny configuration prixest izay mandroaka £ 1,700 amin'ny kitapo misy anao. Tsy misy porofo mikasika ny zavatra azontsika antenaina hanandrana ny Pixelbook 2 ho amin'ity taona ity, na dia nomena ireo tranonkala vaovao aza isika fa mety ho voatery handrotsaka avo lenta avo kokoa ho an'ny iray.
Google Pixelbook 2 mari-tsoratra sy drafitra: Inona no ao anatiny ary inona no ho endriky azy?
Ny sary Pixelbook vaovao no andrasana hitovy amin'ny voalohan-dohany. Tsy zavatra ratsy izany: ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny fitaovana tamin'ny herintaona dia ny famolavolana avo lenta azy, ary ny Google dia mijery kely ny fampifanarahana ny rindram-baiko nomena azy.
Natao ho fitaovana 2-in-1 ny Pixelbook 2 dia azo ampiasaina ho takelaka na solosaina, amin'ny alalan'ny fandefasana ny efijery manodidina ny 360-degrees. Ny rindrina misy ny sisintany amin'ny sisim-pasika dia noporofoina fa somary nihodina tamin'ity indray mitoraka ity, ary koa ny fampisehoana mampihetsi-po dia miverina miaraka amin'ny fanohanana ny penisin'i Google napetraka.
Raha ny ao anatiny, tsy fantatsika loatra hoe inona no mihazakazaka ny fandaharana. Ireo mpandrindrana vaovao dia nomena, fa raha avy any amin'ny tobin'i Intel izy ireo, na dia kely kokoa ny havia, mety ho hitantsika ny CPUs vaovao avy amin'ny Qualcomm izay mampiasa ny solosaina finday?
Na izany na tsy izany, mazava tsara fa ny Pixelbook 2, tahaka ny teo aloha, dia hanolotra fanatsarana ny fahombiazan'ny asa amin'ny hafa an'ny Chromebooks eny an-tsena. Izay no azonao omena azy.
Any amin'ny toeran-kafa, heveriko fa mety ho ny fahafahana miditra an-tsokosoko ny fametrahana ny fanondroana an-doha-panafody, noho ny fahamendrehana ny Lisitry ny Pixelbook tamin'ny taona lasa rehefa tonga tany amin'ny filaminana izy. Azontsika atao ihany koa ny mahita ny fahatsapana ny fametrahana voalohany ny fametrahana ny tarehimarika, miaraka amin'ny fampiasana fakantsary IR eo ambonin'ny efijery. Ny modely 4G LTE ihany koa dia mety tsara indrindra.
Ny GeForce NOW an'ny NVIDIA NANDOSITRA - Ny alàlan'ny GRID Cloud Gaming dia mandeha amin'ny lalan'ny fanoratana
Ny Synology dia manomboka ny Beta sy ny New Hardware DSN 6.0
Google's Pixel C mba hifaninana amin'ny iPad Pro, Surface Pro amin'ny tsenan'ny tranokala fampirantiana
PayPal manomboka PayPal.Me, Fomba tsotra kokoa hangatahana vola mampiasa ny URL manokana anao
Aza manary latabatra intsony ao amin'ny Google Chrome
Galaxy Tab S2 vs Apple iPad Air 2: Fahaiza-mifidy
Voarakitra an-tserasera amin'ny alalan'ny iPhone ny Facebook mivantana
Tags:Google Google Pixelbook Tablet ordinatera
PPA haino aman-jery sosialy ram Screen vaovao farany web server fitaovana finday Video Users Chrome SEO Unité centrale bilaogy OS X fanamarinana iPhone Android Google fifamoivoizana Rafitra fikirakirana PHP endri-javatra command line "PC Nginx MAMAKA fikarohana Apache SSD Up " HTML HTTP takelaka fikirakirana One ' finday avo lenta Microsoft Windows tahirin-kevitra Ubuntu 14.04 Support rindrambaiko Apps Performance Samsung Galaxy Ubuntu Firefox Facebook Twitter 'App Microsoft YouTube HTTPS MySQL lalao afa-po Ubuntu 16 GNOME raki-daza Phone Cortana Plugin CentOS Linux Mint web browser USB API Server Toetoetra ubuntu 15.04 famotsorana rafitra Command Ubuntu 14.10 hametraka Debian WordPress 04 windows update Windows 10 Plugins fitaovana IP adiresy Samsung Linux Ubuntu Systems Bing SSH File Windows Phone CentOS 7 Company Windows loharano misokatra Malagasy Bible taona app store Unix bilaogy Windows 8 paoma 10 toe-tsaina PDG Database Apple Watch fitaovana Linux famerenana lalao fitaovana Fitaovana finday Time nbsp